Ivan Perisic Ibali leBantwana I-Untold Biography Iinkcukacha zeBomiBogger
ikhaya IIMALI ZE-EUROPE Ivan Perisic Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNdaba epheleleyo yebhola yeGlaus eyaziwa kakhulu ngegama lokuqhayisa; "UUHen". Indaba yethu ye-Ivan Perisic yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela kwixesha lakhe lokuzalwa. Uhlalutyo luquka ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, imvelaphi yentsapho, ubuhlobo bentsebenziswano, kunye nezinye iinjongo ze-OFF (ezingaziwa) malunga naye.
Ewe, wonke umntu uyazi malunga nokubonakalisa kwakhe okubonakalayo njengewindi okanye umdlali wesibini. Nangona kunjalo, bambalwa abajonga i-Bio ye-Ivan Perisic enomdla kakhulu. Ngoku ngoku ngaphandle kwee-ado, masiqale.
Ivan Perisic Ibali Ibantwana Plus Untold Biography Facts -Obomi bakwangoko
U-Ivan Perisic wazalelwa kwi-2nd Ngomhla kaFebhuwari, i-1989 kunina, uTihana Perišić noyise u-Ante Perisic Split, Croatia.
U-Ivan Perisic uvela kwimvelaphi yentsapho. Nabazali bakhe, u-Ivan wakhula kunye noodade wakhe kunye no-Anita Perisic. Emva koko ngexesha lobuntwana bakhe, abahlobo bakhe babedla ukumbiza Koka lithetha okoqobo "inkukhu" ngolwimi lwakhe. "IUHen"Isidlaliso safika saba ngenxa yokuba u-Ivan wayehlala ebonakala ebancedisa uyise inkukhu ifama yeenkukhu ngaphandle kwendawo yakubo yaseOmis kwiNxweme yaseCroatia.
Ukukhusela iinkukhu kwakuyin shishini enkulu ku-Ante (uyise kaIvan) kunye nentsapho yakhe. Nangona kuthiwa yi-nickname "UHen", U-Ivan akazange akhathalele kakhulu njengoko wayeziqhenyce ngoshishino kayise.
Ivan Perisic Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts- Uthando Lwasezantsi
Ama-Asides anceda abazali bakhe kwifama yeenkukhu, u-Ivan osemtsha wenza i talente kwibhola ekuqaleni kwexesha. Wasebenzisa ixesha lakhe lokuzikhethela ukudlala ibhola kunye nokuthanda kwakhe umdlalo wambona ebhalisa kunye neqela lendawo, Hajduk Split owamnika isigaba sokubonisa italente yakhe.
Inzame ka-Ivan ukuthatha umsebenzi wakhe omkhulu kwaye kwinqanaba elilandelayo lafika ngengxaki yemali kwiintsapho zasePerisi. Abazali bakhe babengenakukwazi ukufumana iimali zakhe zemfundo. Imfuno yeemali zafika enkulu imibingelelo kuba uyise owayenokubuhlungu ukuba athengise iifama zeefama zeefama zeenkukhu ukuze anakekele iimfuno zomntwana wakhe.
Uyise ka-Ivan, u-Ante Perisic uyindoda ekholelwa ukutyalomali kwonyana wakhe nangona kuthetha ukuyeka yonke into ayinayo. U-Ante wathengisa izixhobo zakhe zeenkukhu ngenjongo yokunyusa iimali zokuthumela unyana wakhe kwiziko lebhola lebhola e-Croatia.
Ngenjongo yokufumana intsapho yakhe, u-Ante kwafuneka athenge izixhobo zezolimo ngetyala eyamfumana emva kweengxaki (Ichazwe ngezantsi kwiIvan Perisic Family Facts). I-antie iPerisic yayikho ngenxa yonyana wayo kwiindlela zonke.
Ivan Perisic Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts- Isibingelelo sokugqibela kunye nokuphakama kwegama
Sekunjalo, kwakuyi shishini lentsapho yeenkukhu ebeka ikhosi yekhondo lika-Ivan ekuqaleni. U-Ivan wasebenzisa iminyaka emithandathu eqinile eHajduk, edlala ibhola lakhe kunye nokuya esikolweni. Nangona wayekhathazeka ngokubakho kwizinto zakhe zokuthengwa kweenkukhu, u-Ivan wabonayo umboniso wanquma ukuthatha enye mboleko. Ngeli xesha, imali yokubolekwa yayisetyenziselwa ukuthumela unyana wakhe eFransi ukuze athole amathuba amakhulu kumsebenzi wakhe. Njengalolu xesha, u-Ivan wabizwa ukuba alwe novavanyo lukaSochaux, iqela laseFransi elisungulwe nguJean-Pierre Peugeot, ilungu elivelele leentsapho zePegegeot.
Kumfana osemncinane u-Ivan, injongo ephambili yokuya eFransi ngaphandle kokufumana ithuba emsebenzini wakhe kwakukuhlala emele kwaye aphakamise imali ukuze abuyisele iitalato ezinkulu zikayise.
Ngaphandle kokungathandabuzeki, ezininzi zeemali zagqitywa ekuhambeni kwakhe Sochaux. Le ntshukumo yenzeke kwixesha le-2006 / 2007. Ngenhlanhla kuye, u-Ivan waphula ngokukhawuleza xa edlala umdlalo wakhe wokuqala kwiqela. Ngelo hlobo, kwi-2006, amaphephandaba aseFransi aqala ukubhala malunga omncinci onobuhlungu echazwe ngezantsi owayethanda ukuchukumisa isihlwele.
Intsebenzo ephawulekayo kaIvan yabangela ukuba aye eBelgium apho wayekholelwa ukuba uya kukhula ngokukhawuleza. U-Ivan waqala ngomboleko eRoeselare ngaphambi kokufudukela kwiClub Brugge apho ekugqibeleni wazenzela igama. Ngenkampani yaseBelgium, u-Ivan waba yiBelgium Pro League yegosa eliphezulu kunye neBelgian Best Footballer yonyaka we-2011.
Le nto yamenza ukuba ahambe Borussia Dortmund apho waphumelela i2011-12 Bundesliga. Ngeli xesha, wayengaziwa ngokuba ngu- inkwenkwe enobubele, kodwa ibhola lebhola elikhulileyo kunye elibulalayo kumaphiko naphambi komgomo. Uhambo lwakhe oluya kuVfL Wolfsburg kunye ne-Inter Milan lulandela emva koko, njengoko bebathethi, ngoku iimbali.
Ivan Perisic Ibali Ibantwana Plus Untold Biography Facts -Ulwalamano lobomi
Kwiqela lebhola laseCroatia eliphumelelayo, kukho inqwelo enhle, intombi kunye nomfazi. U-Ivan Perisic wadibana nomntwana wakhe omnandi, uJoospa esikolweni esiphakeme. Emva koko, ababini abathandana nabo befunda nabo bafunda ibhentshi yesikolo efanayo kwiklasi.
Bobabini baqala ubudlelwane babo njengabahlobo abakhulu kwaye kamva babandakanyeka. U-Ivan noJosipa batshata ngo-2012 ngexesha lakhe kunye noBorussia Dortmund. Baye babesandul 'ukutshatisa umtshato wabo.
Ngokubini, zombini isibini sinentombi egama linguManuel kunye nendodana, uLeonard oneminyaka emithathu ubudala kunodade. ULeonardo Perisic wazalelwa eWolfsburg kwaye kuthiwa unxulumano oluqinileyo kunye noyise okholelwa ukuba unyana wakhe uya kuba ngumdlali webhola. Ngeli xesha, ngaphandle kweengxaki zemali ezinjengoko afunyanwa nentsapho yakhe.
U-Ivan Perisic uzinikele ngokupheleleyo kwiintsapho zakhe. Wena akayithandanga ininzi yoluntu, u-Ivan wade wathatha umfanekiso kunye nentsapho yakhe phambi kwebala elihle laseLake Lugano eSwitzerland.
Ivan Perisic Ibali Ibantwana Plus Untold Biography Facts -Ulwazi lweentsapho
Imali i-Ivan Perisic eyenziwa kwibhola yayinceda kwintsapho yakhe. Wayekhathalela unina, udade waza wahlawula amatyala kayise kwisixhobo sokulima esathengayo ngemboleko ngenjongo yokugcina intsapho yakhe isaphila.
Njengomnye umthombo othiwa, izixhobo zezolimo u-Antie ezithengiweyo ngemali mboleko azizange zihlawulwe ngexesha kwaye oku kwabangela ukulwa kwezomthetho okwenene kwintsapho yamaPerisi. Ukoyika kwabo kwagqitywa ekugqibeleni njengoko u-Ivan wakhokhela nganye ipeneni ehlawulwa.
Ivan Perisic Ibali Ibantwana Plus Untold Biography Facts -Iinkcukacha zomsebenzi
U-Ivan Perisic wabuyela kunye naye Jurgen Klopp eDortmund ngenxa yokungabi nesikhathi sokudlala. Klopp Umfanekiso olapha ngezantsi uhlala ehlala esilumko kwiimali zikaPerisic waza wambiza ngokuthi "umntwana"Ngenxa yokuziphatha kwakhe. Ngokufanelekileyo, u-Ivan Perisic akafuni ukuhlala ebhentshini. Xa uthenduliwe ngale nto, wathi: ...
"Xa ndihleli ebhentshini, ndiya kufa," Ukungadlali umdlalo kubonakala ngathi ndijeziswa. Kwafuneka ndifunde ukuba ngaba ngongcali malunga naloo ndlela inzima. Ndifanele ndikhule ngokomoya "
U-Ivan Perisic akayena umhlobo kubahlawuli be-Juventus. Xa ecaphukile, ubamba umchasi wakhe ngentamo nangomhlathi njengoko kubonwe kwimeko UJuan Cuadrado kwaye Alvaro Morata.
QHUBEKA: Siyabulela ukufunda iindaba ze-Ivan Perisic yabantwana kunye neengxelo ezingezizo. at LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ubona into engabonakali kakuhle kweli nqaku, nceda ubeke ingxelo yakho okanye uxhumane nathi!
Kususela kwiBanega Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Ngamana 6, 2018
Disemba 31, 2017